ठाकुरले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्ने यी हुन् आठ निवर्तमान सांसद - Pnpkhabar.com
ठाकुरले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्ने यी हुन् आठ निवर्तमान सांसद
काठमाडौं, ११ असार : सत्ताको आकर्षण कतिसम्म हुन्छ भन्ने जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले बिहीबार बोलाएको बैठकमा उपस्थित सदस्य हेर्दा पनि थाहा हुन्छ ।
सरकारबाट हटेको पर्सिपल्ट बिहीबार ठाकुरले विघटित जसपाको संसदीय दलको बैठक बोलाएको थिए । बैठकमा ठाकुरले आफूनिकट विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई बोलाएका थिए ।
तर, बैठकमा आधाजसो निवर्तमान सांसद अनुपस्थिति भए । अनुपस्थित भएकामध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौंमै बसेर बैठकमा गएनन् । कोहीले काठमाडौंबाहिर भएको कारण देखाउँदै बैठकमा जान नसकेको बताए।
जसपाको संसदीय दलमा ठाकुर पक्षका २० र उपेन्द्र यादव पक्षका १२ जना सांसद छन् । यादव पक्षका ५ जना सांसदहरू वीमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरैया, रुही नाथ, कल्लुदेवी विश्वकर्मा, रेणुका गुरूङ कित्ता परिवर्तन गरी ठाकुर पक्षमा पुगेपछि संसदीय दलमा ठाकुर पक्ष बलियो भएको हो ।
बिहीबार ठाकुर पक्षले बोलाएको बैठकमा राजकिशोर यादव, विमल श्रीवास्तव, प्रमोद साह, नरमाया ढकाल, रुही नाथ, दुलारी देवी खतवे, अमृता अग्रहरी, रानी मण्डललगायतका सांसद अनुपस्थित भए। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
‘अहिलेको सरकारलाई गफाडी नबन्न सुझावसँगै ऊर्जा मन्त्रीले निःशुल्क बिजुली दिन्छु भनेकोमा आपत्ति’
ठाकुर जस्को आफ्नो घर छैन, श्रीमती र छोराको मृत्यु
झिङ्गाको सरापले डिंगा मर्दैन : डा. बाबुराम भट्टराई
सांसद आशाकुमारी बिकद्वारा अनलाइन गेम बन्द गर्न आग्रह
नागरिकलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ : डा. केसी
इजरायलका लागि १००० कामदार माग (विज्ञापनसहित)
जिन्सको कपडा लगाएको निहुँमा किशोरीको ह त्या, हजुरबुबा र काका पक्राउ
नेपालमा कोरोनाको थप संक्रामक उत्परिवर्तन ‘कप्पा’ फेला
काभ्रेको रोशी खोलामा टिपर खस्यो, १ जनाको मृ’त्यु